Sheekada filimka Total Dhamaal: Filim shactiro dhameestiran leh laakiin aan fariin adag xambaarsaneyn – Filimside.net
Sheekada filimka Total Dhamaal: Filim shactiro dhameestiran leh laakiin aan fariin adag xambaarsaneyn
February 22, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 22, 2019
Taxanaha Dhamaal ma ahan mid ku heer ah ganacsi iyo caanimo taxanayaasha shactirada badan sida Housefull iyo Golmaal. Balse xaqiiqada waxay tahay labadii Dhamaal horey loo sameeyay Dhamaal (2007) iyo Double Dhamaal (2011) guulo wacan gaareen sidoo kalena TV-yada aad looga daawado oo ay qoysaska jecel yihiin.
Sidaa darteed qaybta sedexaad Total Dhamaal waa mid loo baahnaa in la sameeyo weliba qeybtaan sare ayaa loo qaaday hadal heyn ahaan madaama lagu soo kordhiyay Ajay Devgn, Madhuri Dixit iyo Anil Kapoor inkastoo Sanjay Dutt iyo Ashish Chowdhry laga reebay oo taxanahan iyagana lagu yaqiinay.
Jilaayaasha Filimkan: Ajay Devgn, Riteish Deshmukh, Arshad Warsi, Anil Kapoor, Madhuri Dixit Nene, Jaaved Jaaferi, Sanjay Mishra, Vijay Patkar, Boman Irani
Fariinta Filimkan Oo Kooban: Total Dhamaal waa filim ka hadlaayo shaqsiyaad la isku keenay oo mid walbo midka kala ka dhuunisan yahay ama ka baqiilsan yahay sidoo kalena socdaal wada galayaan. Guddu (Ajay Devgn) waa nin tuug xariif ah balse mid iska yar ah awoodiisa isaga iyo saaxiibkiis Johnny (Sanjay Mishra) waxay ogaanayaan in lacag cadadkeeda aad u badan yahay Hotel la isku dhaafsan rabo.
Waxayna tagayaan Hotel-ka balse waxay ogaanayaan qofka lacagta faraha badan lagu wareejin rabo inuu yahay taliyaha ciidanka (Boman Irani). Laakiin waxba kama waabsanayaan Guddu (Ajay) iyo Johnny (Sanjay Mishra) waxay dhacayaan taliyihii goobtana wey isaga baxsanayaan.
Laakiin iyagana waxaa qayaamayo darawalkooda Pintu (Manoj Pahwa) oo lacagta la baxsanaayo waana lacag cadadkeeda gaarayo 50 Crore ($7.14m)!
Dhinaca kale Avinash Patel (Anil Kapoor) iyo Bindu (Madhuri Dixit) mudo 17-sano ah ayay wada noolaayeen balse markaan maxkamada waxay geesteen dacwad furiin.
Sidoo kale Lallan (Riteish Deshmukh) iyo Jhingur (Pitobash Tripathy) waaxda dab damiska ayay la shaqeeyaan balse shaqadooda waa laga soo racadeynaa kadib markii ay laaluush qaateen.
Aditya Srivastav (Arshad Warsi) iyo Manav Srivastav (Jaaved Jaaferi) waa shaqo raadis ah madaama mulkiilahooda Altaaf (Sudesh Lehri) uu shaqada ka racadeeyay madaama ay ka bur buriyeen farshaxan malaayiin Rupees joogo waxayna kala soo cararayaan milkiilahooda gaarigiisa aalada carsiga ah ku shaqeeyo oo wax badan lagu qabsan karo.
Haddaba Avinash Patel (Anil Kapoor) iyo Bindu (Madhuri Dixit), Lallan (Riteish Deshmukh) iyo Jhingur (Pitobash Tripathy) oo wadadad ku socdaan iyo labada kale saaxiibada ah Aditya Srivastav (Arshad Warsi) iyo Manav Srivastav (Jaaved Jaaferi) oo isla wadada weyn ku socdaan waxay arkayaan diyaarad bur bureyso waxayna tagayaan goobta diyaarada ku bur burtay ayagoo ku arkayaan Pintu (Manoj Pahwa) oo geeriyoon rabo iyo duuliyiisha oo dhintay!
Pintu (Manoj Pahwa) ayaa kooxdan u sheegayo lacagtii uu soo Guddu (Ajay Devgn) kasoo xaday inuu ku qariyay carwo xeywaanada lagu xanaaneeyo oo ku taalo Janakpur sidoo kalena 450km u jirto meesha ay joogaan laakiin goobta waxaaba imaanayo Pintu (Manoj Pahwa) inta uu dar daarmayo Guddu (Ajay Devgn) oo xarfaanta kale u sheegayo in lacagtan uusan damac kasoo galin madaama uu isaga iska leeyahay!
Laakiin xarfaanta kale ee shiidka haayo Avinash Patel (Anil Kapoor), Bindu (Madhuri Dixit), Lallan (Riteish Deshmukh), Jhingur (Pitobash Tripathy), Aditya Srivastav (Arshad Warsi) iyo Manav Srivastav (Jaaved Jaaferi) waxay iyagana Guddu (Ajay Devgn) ugu hanjabayaan inay booliska u sheegayaan sheekadan haddii kale uu lacagta wax ka siiyo.
Sidaa darteed Guddu (Ajay Devgn) wuxuu soo jeedinaa qorshe ah qofkii ugu hortago ama gaaro carwada lacagta taalo oo 450km u jirto inuu qaadan doono.
Waana halka uu ka bilaabanayo loolan ah qofkii goobta u hortago inuu qaadan doono 50 Crore ($7.14m) haddaba safarkan loolanka ku dheehan yaa ku guuleesan doono?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Total Dhamaal: Qoraayaasha filimkan Ved Prakash, Paritosh Painter iyo Bunty Rathore sheeko kala dhiman ayay soo qaateen inta badana qaybta kowaad taxanaha Dhamaal ayay dib ugu laabteen sidaa darteed sheekada filimkan waa mid shactiro badan laakiin aan qiiro laheyn sidoo kalena hadalo kusoo jiidanayo laguma hadlaayo.
Director Indra Kumar agaasinkiisa sheekada waa heer sare halka saac hore marka loo eego shactiro ahaan iyo jiho ahaan laakiin halka saac dambe marka socdaalka loolanka jilaayaasha bilaawdo ayuu filimkan isku dhex yaacayaa fariin ahaan iyo xiiso ahaan.
Bandhiga Jilaayaasha: Ajay Devgn door shactiro badan ayuu qaatay wuxuuna sameenayaa ficilo siweyn kuu soo jiidan doonaan dhanka mada daalada waana ku haboon yahay taxanahan Dhamaal inuu marwalbo kaalin ku yeesho uma eko jilaa ku cusub taxanahan madaama labadiisa qeybood hore uusan kasoo muuqanin.
Anil Kapoor doorkiisa waa mid wacan laakiin dhanka shactirada Madhuri Dixit ayaa in badan kaga saameyn badan filimkan sidoo kalena doorkeeda waxaa xiiso u yeelayo inay tahay qof caadifad badan ama dareen badan oo marwalbo kooxda filimkan ku guubaabiso sax iyo qalad in la kala saaro.
Riteish Deshmukh shactiradiisa lagu yaqiinay ayuu la yimid markaan Total Dhamaal awoodiisa ma badno marka loo eego labadii Dhamaal horey saameynta adag uu ku lahaa.
Arshad Warsi isagana kaalintiisa waa qaatay mana ku niyad jebinaayo balse Direcror Indra Kumar wuxuu inta badan diirada saaray doorarka taxanahan ku cusub sida Ajay, Anil iyo Madhuri.
Jaaved Jaaferi oo taxanaha Dhamaal laf dhabar u ahaan jiray waligiis markaana doorkiisa wuu adag yahay laakiin waqtiga uu shaashada kasoo muuqanayo ayaa yar sidaa darteed taxanihii uu ku saameyn badnaan jiray ayuu marti ka noqday!
Boman Irani doorkiisa waa mid shactiro badan balse Johny Lever iyo doorkiisa Shubroto ayaa ah midka ugu saameynta badan dhamaan jilaayaasha doorarka caawiyaha ah ku leh filimkan wuxuuna ruug cadaagan muujiyay weli Bollywood-ka inaysan ka maarmin.
Ugu dambeyntii Daanyeerka ah ee aflaanta Hollywood-ka kasoo muuqdo Crystal isagana doorkiisa waa mid xiiso badan madaama uu ku jilaayo waardiyaha carwada xeywaanaadka ku nool yihiin sidoo kalena lacagta loo wada ordaayo taalo.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Total Dhamaal:
Halka saac hore oo heer sare ah shactiro ahaan iyo dhan walbo
Bandhiga jilaayaasha oo heer sare ah qaabka filimka loogu qeebiyay
Muusigada gadaal ka yeereyso waa mid wacan sidoo kalena xeywaanaadka filimkan kasoo muuqdeen iyo goobaha lagu duubay waa kuwo kusoo jiidanayaan.
Muxuu Ku Liitaa Total Dhamaal:
Halka saac dambe oo aan xiiso badan laheyn dhanka shactireynta iyo isku dabaridka
Heesihiisa oo aan ahayn kuwo saameyn adag leh.
Qaabka sheekada loo qaray oo aan adkeyn lana fahmi karo waqti walbo waxa xiga ee dhacaayo.
Qiimeynta Sheekada Filimka Total Dhamaal: 2/5 (Labo Xidig)
Gunaanad: Total Dhamaal waa filim shactiro dhameestiran leh oo qoysaska halmar daawan karaan madaama halka saaciisa hore heer sare yahay una dheer tahay bandhiga jilaayaasha balse fariintiisa oo si wacan loo qorin awgeed mashruucaan ma noqonin Classci ah. Si kooban Total Dhamaal ma gaaro qaybta kowaad Dhamaal halka uu ka yara wanaagsan yahay qaybta labaad Double Dhamaal.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka shactirada dhameestiran leh Total Dhamaal:
Waxaa Aqrisay 814